Human Interest Stories | International Organization for Migration
“मलाई याद छ म सानै हुँदा देखि नै सुनेकी मेरा छिमेकी, आफन्तहरु जोकोही पनि भारतमा काम गर्न जान चाहन्थे। हाम्रो गाउँमा काम गर्नु भनेको पशुपालन र खेतमा काम गर्नु मात्र हो। तर गाउँमै बसेर कमाइ गरीखाने अवसर जुटाउन सबैको भाग्यमा हुन्थेन। धेरै कम मानिसले मात्र यो अवसर पाउँथे। काम गर्न रोजगारी पाउन गाउँमा कुनै कारखाना / उद्योगहरु थिएनन्। गाउँमा काम गर्नुको मतलब समय खेर फाल्नु र त्यही ठाउँंमा अड्किनु मात्र हुन्थ्यो। गाउँमा कमाइ हुँदैनथ्यो। अन्न उब्जाउ, ज्युँदो रहन भोक टार। त्यत्ति हुन्थ्यो।
म जस्ता धेरै युवाहरु आफूलाई कुनै दायरा भित्र सीमित राख्न चाहँदैनन्। हामी संसार भर के के छन् पत्ता लगाउन, हेर्न र बुझ्न चाहन्छौं। आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्नले तपाईको पेट त भर्छ तर तपाईको चाहना र महत्वाकांक्षालाई तृप्त पार्न सक्दैन। त्यसैले म घर छाडेर निस्केँ। आमा र बुबा म नजाओस भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। आमा-बुवाले आफ्नो जीवन खेतको काममा बिताउनुभयो। उहाँहरु आफुले जे उत्पादन गर्न सक्नुभयो त्यही खानुभयो। तर म सक्दिनँ। म घर बाहिर काम गर्न चाहन्थेँ। मैले अरु नयाँँ ठाउँहरु देखेँ र नयाँँ मानिसहरु भेटेँ भने मैले नयाँ कुराहरु सिक्नेसक्नेछु र खेती बाहेक अन्य कुनै व्यवशाय अपनाएर स्वतन्त्र जीवन ज्युन सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसैले म हिंडेँ।
“यी पहाडहरूमा पानीको मुहान छैन। खोला बाट पानी ल्याउन नहर खनिएका वा पाइप बिछ्याइएका छैनन्। बालीनाली लगाउन वर्षाको भर पर्नुपर्छ। यो वर्ष पानी कम पर्‍यो। बाली राम्रो भएन। कृषिका भरमा बाँच्न र परिवार पाल्न नसकिने हुनाले अन्य काम खोज्नुपर्छ। यहाँ कुनै उद्योग कारखानाहरू छैनन्। सरकारी कार्यालयमा काम गर्न या त तपाईंको पहुँच हुनुपर्छ या तपाईं निकै पढेलेखेको हुनुपर्छ। हाम्रो लागि दुबै बाटो असम्भव प्राय: छन्। हाम्रो कुनै ठुलो मानिससँग नाता जोडिएको छैन। र हामी उचित शिक्षा लिन पनि सक्दैनौं। मैले स्कूल किन बिचमै छोडेँ भनि तपाईं सोध्नुहोला। मलाई शिक्षा भन्दा खाना जुटाउनु बढि जरूरी थियो। किताब र स्कूलले मलाई खाना दिँदैनथ्यो। मेरो पेट भर्न मैले काम गर्नै पर्छ भनेर मैले महसुस गरेँ। यसका लागि मलाई विद्यालय हैन काममा जानुपर्छ भन्ने मैले सिकेँ।
हामी पाँच दिदीबहिनीहरू छौं। मेरी कान्छी बहिनी तीन महिनाको छँदा मेरो बुबा भारत तर्फ लाग्नुभयो। त्यसबेलादेखि बुवा कहिल्यै फर्कनुभएन र मेरी आमाले हामीलाई एक्लै हुर्काउनुभयो। बुबाले कहिल्यै फोन गर्ने, पैसा पठाउने केही गर्नु भएन। संपर्क बिहिन रहनुभयो। आमा साना नानीहरु सँग एक्लै छाडिनुभयो। आमाले अर्को विवाह गर्नुभएन। उहाँ बुबाले जस्तो हामीलाई छाडेर पनि जानुभएन।
"हाम्रो पिडा को सँग पोखौँ?"
कोरोना भाईरस महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाइ घर फर्कन वाध्य हुनुभएका नेपालीहरु तथा उहाँहरुको कमाइमा आश्रित परिवारका कथाहरुको सँगालो हो। यि कथाहरु आप्रवासन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय आइओएमको "आप्रवासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकासमा मुलप्रवाहित गर्ने" (Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development - MMICD) परियोजना अन्तर्गत युरोपियन संघको आर्थिक सहयोग तथा 'Stories of Nepal' सँगको साझेदारीमा सँगालिएका हुन्।
“Who do I tell?” – Migration and the Pandemic isacollection of accounts from Nepali communities which have been affected by return migration because of COVID-19. It was developed as part of the International Organization for Migration’s EU-funded (DG-INTPA) “Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development (MMICD)”.